बेसार कत्तिको उपयोगी ?:: Naya Nepal
बेसार कत्तिको उपयोगी ?
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिले एक साता अघि सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गर्नुभएको विषयलाई कोरोना भाइरससँग जोड्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ । बेसार र हाछ्युसँग जोडेर के यो आलोचना ठिक हो त ? आलोचकहरुले मजाकमा भनिरहेका छन् की, केहि अध्ययन गरेर बोलेका छन् ? हो म चाहिं प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गर्नुभएको केहि कुरामा विमति राखेपनि धेरै कुरामा सहमत छु । बेसारको गुण बारेमा ज्ञान ग्रहण गर्ने भन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई उडाउनु एकदम गलत हो ।
मुलुकको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । मौलिक हकका रुपमा व्याख्या समेत गरेको छ । तर, स्वतन्त्रताको नाममा पदीय गरिमाको समेत अवमूल्यन हुने गरे खिल्ली उडाउनु विवेकसम्मत होइन ।
अमेरीकाका प्रधानमन्त्री र रास्ट्रपति ट्रम्पले भनेकै आधारमा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइनलाई औषधिको रुपमा कोभिड १९ को उपचार गर्न थालियो । तर, पछि बिएमजेरलान्सेट जस्ता मेडिकल जर्नलले यो शरीरको लागि हानिकारक र मुटुको लागि समेत नराम्रो भएकोले उपचारमा केहि सहयोग नहुने र यसले झन मृत्युको जोखिम हुने भनेपछि बन्द गरियो । अखिर यो भेदभाव किन ?
अमेरिका, युरोप लगायत शक्तिशाली मुलुकका प्रमुखले जे बोले पनि ठीक हुने र गरिब देशका प्रमुखले सहि अभिव्यक्ति दिंदा पनि गलत हुने ? सर्वप्रथम यो मानसिकता पहिला त हामी नेपालीले हटाउन जरुरी छ । जहाँसम्म प्रधानमन्त्रि ओलीले भन्नुभएको बेसारको सहि प्रयोग गर्यो भने कोरोना जस्तो रोग सँग लड्न मद्दत गर्छ यो सत्यता हो ।
हाछ्युले गर्दा घाँटी र फोक्सोमा भरिएका फोहोर र किटाणुलाई बाहिर फ्याक्न मद्दत पुरयाँउछ । साथै फोक्सोको शक्ति बढाउँछ । ज्वरो, हाछ्यु आउने, पखाला लाग्ने र उल्टी हुने जस्ता लक्षण शरीरका प्रतिरक्षा प्रणालीको प्राकृतिक प्रक्रिया हुन् । त्यसैले यस्ता लक्षणलाई औषधिको प्रयोगले दबाउने होईन बरु किन भएको थाहा पाएर उपचार गर्न जरुरी छ । आम मानिसलाई चिकित्सा संकट र रोगको संकटको बारेमा थाहा नहुनाले समस्या बढ्दो छ । अग्रेजीमा एउटा भनाई छ,- “Supression leads to suffer” अर्थात दमनले कष्ट निम्त्याउँछ रोग तबबाट सुरु हुन्छ जब हामिले रोगलाई उपचार नगरेर लक्षणलाई दबाउन खोज्छौ ।
के हो बेसार ?
बेसार एउटा अचुक औषधि हो । यसमा कुनै दुबिधा छैन । बेसारका फाईदाबारे विभिन्न जर्नलमा पनि छापिएका छन्। यसले पनि प्रमाणित गर्छ ।
बेसारले रगत पातलो बनाउने कुरा जो सबैलाई थाहा नभएको कुरा हो । उहाँले जण्डिस बाहेक अरु भन्नु भएका कुरा सहि हुन । बेसारले जण्डिस बनाउदैन । उपचार गर्छ अझै भनौं भने कलेजोको कुनै पनि समस्यालाई एकदमै उपयोगि हुन्छ । जण्डिस कलेजोको खराविले देखिने एउटा लक्षण हो । बेसारले मेटाबोलिक रेट बढाउँछ । बेसारमा एन्टिअक्सिडेन्ट, एन्टिभाइरल, एन्टिइन्फलामेटी जस्ता कयौँ गुण हुन्छ्न । बेसार खानाले कलेजाको काम गर्ने शक्ति र बाईल उत्पादन जस्ता काम गर्छ । त्यसैले कलेजोको रोगीले बेसार प्रयोग गर्दा फाईदा हुन्छ भन्ने विभिन्न जर्नलमा प्रकाशित भैसकेको छ । सुगर , प्रेसर , मोटोपन, मुटुरोगि जस्ता कयौं रोगको लागि बेसार खानु फाइदाजनक मानिन्छ ।
बेसार दैनिक ५०० देखि २५०० एमजिसम्म प्रयोग गर्दा फाईदाजनक हुन्छ ।
बेसारको यति उपयोगि हुदा हुदै पनि यति बिरोध किन ? घरमा भएको विभिन्न अमृत जस्ता जडिबुटीलाई उपयोग गरे घाटा के छ ? हामिले जे कुरा पनि विदेशिले बनाएको र भनेको कुरा आँखा चिम्लेर बिश्वास गर्छौ। यसको मतलब औषधि नखानुस भनेको होइन औषधिसंगै घरमा भएकालाई जडिबुटिलाई प्राथमिकता दिउ भन्न खोजेको हो। औषधि भान्सामा हुनसक्छ यतातिर पनि ध्यान दिउँ।
प्रकृति आफैँ एउटा ठुलो चिकित्सक हो। हाम्रो शरीरको प्रकृतिले नै कति रोग आफै ठिक पार्छ । वास्तबमा स्वास्थको परिभाषा नै फरक छ, कुनै पनि रोग नभएको अवस्थालाई स्वास्थ भन्निछ ।वास्तबमा स्वास्थ किन भयौ त त्यो कुरामा ध्यान नदिने ? कुनै रोग किन लागेन ? स्वास्थ भनेको त वास्तवमा केही कुरा हुनु हो, जस्तो कि प्रतिरक्षा । शरिरमा प्रतिरक्षा हुनु नै स्वस्थ हुनु हो। त्यसैले रोगसगं लड्न शरीरमा प्रतिरक्षामा काम गर्ने विभिन्न जस्तो कि ईम्मुयुन प्रक्रिया , अन्जियोजेनेसिस, प्रोबायोटिक्सस्टिम सेलहरुलाई सक्रिय बनाउनु र कायम गरेर नै राख्नु हो । यो तब कायम र सकृय हुन्छ जब हामीले स्वास्थ्य जिवनशैली अपनाउँछौँ।
प्रकृति नै समाधान
प्रधानमन्त्री ओलिले स्वास्थ जिवनशैली अपनाउँ भन्दा किन यति बिरोध ? अहिलेको संकटमा सरकारबाट केहि कमजोरी भएको छ । त्यो कुरा उठाउनपर्छ । कोभिड १९ को रोकथाममा सरकार चुकेको छ । हामी यो कुरालाई बिरोध गर्न सक्छौ । तर सहि कुरा गर्दा बिरोध गर्नु कत्तिको सहि छ ? प्रकृतिले बिनास निम्त्याएको छ भने यसको समाधान नि प्रकृतिमा नै हुन सक्छ ।
अहिले चर्चामा चलेको औषधि डेक्सामेथासोन एक स्ट्रोराईड जुन क्यान्सर रोगको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ । यसको साईड इफेक्टबाट शरीरलाई ठिक हुन ६ महिना देखि १ बर्ष लाग्छ । विभिन्न अङ्गहरुलाई असर गर्छ साथै शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई नै कमजोर पार्छ । यसको पनि प्राकृतिक विकल्प छ कि छैन कसैले मतलब गर्दैन खोज्दैन पनि । डेक्सामेथासोन प्रयोग गर्नु हो स्तर प्राकृतिक बिकल् पछ भन प्रयोग गर्दा बेफाइदा त छैन नि । किन प्रकृतिक उपचारलाई हामी पूरा नकार्ने?
जून १४, २००३, द ल्यान्सेटको मुद्दामा उद्धृत गरिएको एउटा अध्ययनमा जर्मन अनुसन्धानकर्ताहरूले पत्ता लगाएकि ग्लाइसिरिझिन, लाइकोरीस (मुलेथि) जराको एक सक्रिय तत्व, सार्स भाइरसको बिरूद्ध सार्र्सलार्इ मार्न र उसको प्रजनन क्षमता रोक्न (प्रयोगशालामा गरेको अध्ययन) उल्लेखनीय रूपमा चार भन्दा बढि अग्रणी एन्टिवाइरल औषधि भन्दा उपयोगी मानिएको थियो । अहिले हामिले किन मुलेथी उपचारमा प्रयोग नगर्ने?
लिभरपुल अस्पतालमा भएको अध्ययनले डेक्सामेथासोनलाई सालकी (एउटाबनस्पति) एक विकल्प मानेको छ । यदि यसो हो भने हामीले सालकीलाई किन उपयोगमा नल्याउने । अब कसैले सालकी प्रयोग गरौं भने बिश्वास नगर्ने ? हामी नेपालीको बानी यस्तो भैसकेको छ कि, कुनै बिदेशीले नभन्दासम्म त्यो कुरा मान्दैनौ । पहिला ऋषिमुनिहरुले जडिबुटी बनस्पति उपयोग गरेर उपचार गरेका नै हुन । जडिबुटीहरुको सहि उपयोगले शरिरमा कुनै बेफाइदा गर्दैन । त्यसैल आधुनिक उपचार सगैं यी पुराना विधि र प्राकृतिक पद्धतिहरु अपनाउँदा के फरक पर्छ?
आहार नै औषधि
स्वस्थ रहन सहि आहार खानुपर्छ । स्वास्थ्य हनुमा सहि आहाराले फरक पार्दछ । गलत जिबनशैली नै रोगको मुल कारण हुन्। यो कुरालाई प्रमाणित गर्न धेरै टाढा जानुपर्दैन । २०१६ र १७ का नोबेल प्राईज बिजेतालाई हेरौं । अटोफ्याजि (उपवासले कसरी अटोफ्याजि गराउछ र क्यान्सरसम्म उपचारको लागि सहयोग गर्छ), अर्को नोबेल प्राईज सि कर्डियन रिदम जोकि दिनचर्या सहि समयमा गर्नुपर्ने ,दैनिक अनुशासन कै बारेमा नै छ।
आत्माबिश्वासले कसरी रोगसगं लड्न मद्दत गर्छ भन्ने कुरा विभिन्न पेलेसिबो इफेक्टका अध्ययनबाट नै थाहा हुन्छ । एक अध्ययनले मोर्फिन (सबैभन्दा असरदायक एक दुखाई कम गर्ने औषधि ) भन्दा पनि मोर्फिनको नाम दिएर दिएको औषधिले काम गरेको र सोही मोर्फिनले काम नगरेको देखाएको छ । दिमाग नै सबैभन्दा ठुलो शत्रु र मित्र हो । सकारात्मक सोच्नु हुन्छ सकारात्मक परिणाम पाउनुहुन्छ । नकारात्मक सोच्नुहुन्छ नकारात्मक परिणाम पाउनुहुन्छ।
रोगसङ लड्न सबै मिल्न जरुरी छ । त्यसैले सबैलाई साथ लगेर उपचार गर्न जरुरी छ।